Xiriirka FA-ga Ingiriiska oo si adag ugu jawaabay taageerayaashii xoog ku galay garoonka Wembley – Gool FM
Xiriirka FA-ga Ingiriiska oo si adag ugu jawaabay taageerayaashii xoog ku galay garoonka Wembley
Dajiye July 12, 2021
(London) 12 Luulyo 2021. Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa balan qaaday inay ciqaabi doonaan dhamaan taageerayaashii ku soo xoomay garoonka Wembley, kaas oo martigaliyay xalay finalka koobka qaramada yurub ee Euro 2020.
Garoonka Wembley ee magaalada London ayaa marti galiyay kulankii Final-ka ahaa koobka qaramada yurub ee Euro 2020, kaas oo ugu dambeyntii xulka Talyaaniga uu kaga guuleystay Ingiriiska rigoorayaal.
Xulka Qaranka Italy ayaa ku guulestay Koobka Qaramada Yurub ee EURO 2020 kaddib markii uu guul kaga gaaray dhigiisa England rigoorayaal 3-2 kulan leysku daalay oo waqti dheeri ah la aaday kaasoo ku dhammaaday bar-bardhac 1-1 ah.
Qaar ka mid ah jamaahiirta England ayaa si sharaf darro ah waxay ku soo galeen garoonka ciyaarta iyagoo aan wadan tikidhada ciyaarta, daqiiqado yar kahor bilowga ciyaarta.
Haddaba madaxa fulinta Xiriirka Kubadda Cagta ee Mark Bullingham ayaa u sheegay BBC-da:
“Waxaan sameyn doonnaa dib u eegis buuxda, waxaana la shaqeyn doonaa booliska si aan u soo qabano qof walba ee ku lug leh, waxaana xaqiijin doonaa in tani laga hortago inay markale dhacdo.”
“Way cadahay in qofkasta oo la qabto la mamnuuci doono laguna qaadi doono talaabooyinka saxda ah.”
“Waxaan maamulnaa garoon, ee ma ahan barxada afaafka hore, maadaama kooxda amniga ay shaqo weyn ka qabteen garoonka, laakiin waligood ma arkin wax sidan oo kale ah.”
Waxaa xusid mudan in booliska magaalada London ay shaaciyeen in fiidnimadii shalay ee Axad, ay xireen 49 qof oo isku dayay inay xoog ku galaan garoonka Wembley.
RASMI: Rodrigo De Paul oo ku biiray naadiga Atletico Madrid